Samsung Galaxy S10 Series မှာ Fast Charging အသစ်တစ်မျိုး ပါဝင်လာနိုင် | MyTech Myanmar
Samsung Galaxy S10 Series မှာ Fast Charging အသစ်တစ်မျိုး ပါဝင်လာနိုင်
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အကြာက Samsung ကနေပြီး သူ့ရဲ့ ဖုန်းတွေအတွက် အားသွင်းမြန် စနစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး 15W အားရှိတဲ့ အားသွင်းစနစ်ဟာ တစ်ခြား ဖုန်းတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် အတော်လေး အားသွင်းမြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ OPPO ရဲ့ VOOC နဲ့ OnePlus ရဲ့ Dash Charge နဲ့ Warp Charge လို အလွန်လျှင်မြန်တဲ့ အားသွင်းစနစ်တွေကို ပုခုံးချင်း မယှဉ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ၂၀၁၈ ရဲ့ Flagship ဖြစ်တဲ့ Galaxy Note9အထိ အရင် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Adaptive Fast Charging နည်းပညာကိုပဲ အသုံးပြုနေခဲ့ပြီး ဖုန်းသုံးစွဲမှု အရမ်းများလာတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ Adaptive Fast Charging နည်းပညာက မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ အရင်ခေတ်ကဆိုရင် ဖုန်းကို နှစ်နာရီ သုံးနာရီလောက် အားသွင်းပြီး ပစ်ထားနိုင်ခဲ့ကြပေမယ့် နည်းပညာအပေါ် တစ်ချိန်လုံးမှီခိုနေရတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ နာရီ ဝက် အားသွင်းရုံနဲ့ တစ်နေ့လုံး အသုံးပြုလို့ရမယ့် နည်းပညာကို စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေ တောင့်တလာကြပါပြီ။ အဲ့အတွက် Samsung ကလည်း နောက်ကောက်ကျ မခံတော့ပါဘူး။ နောက်ထပ် မိတ်ဆက်မယ့် Flagship ဖြစ်တဲ့ Galaxy S10 မှာ အတော်လေးလျှင်မြန်တဲ့ နောက်ထပ် အားအမြန်သွင်း နည်းပညာတစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးတော့မှာပါ။
စမတ်ဖုန်း သတင်းတွေ ပေါက်ကြားဖော်ပြလေ့ရှိတဲ့ Ice Universe ရဲ့ သတင်းဖော်ပြချက်အရ Samsung ဟာ အလွန်လျှင်မြန်တဲ့ အားသွင်းမြန်စနစ်ကို စမ်းသပ်နေပြီး Galaxy S10 မှာ သေချာပေါက် အဲ့ဒီ အားသွင်းမြန်စနစ်ကို တပ်ဆင်ပေးသွားမှာပါ။ အဆိုပါ အားသွင်းမြန် စနစ်က အခုလက်ရှိ Samsung ရဲ့ 15W အားရှိတဲ့ Adaptive Fast Charging ထက် အတော်လေး မြန်ဆန်မှာမို့ 15W Charging စနစ်ဟာ Samsung အတွက်တော့ သမိုင်းမှာ ကျန်ခဲ့မယ့် နည်းပညာတစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။ Samsung ဟာ အခုအချိန်မှာ အဆိုပါ အားသွင်းမြန်စနစ်ကို စမ်းသပ်နေပြီ ဆိုပေမယ့် Watt ပမာဏ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာနဲ့ နာမည်ဘယ်လိုပေးမလဲ ဆိုတဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
အဆိုပါ Samsung ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် အားသွင်းမြန် စနစ် သစ်ဟာ ပြိုင်ဘက် ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အားသွင်းမြန် စနစ်တွေကို ယှဉ်နိုင်ပါ့မလား? လက်ရှိမှာတော့ HUAWEI ရဲ့ 40W အမြန်အားသွင်းစနစ်နဲ့ OnePlus ရဲ့ Warp Charge ဟာ အားသွင်းအမြန်ဆုံး အားသွင်းစနစ်တွေဖြစ်ပြီး မိနစ်နှစ်ဆယ် အားသွင်းရုံနဲ့ တစ်နေ့လုံး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အားသွင်းမြန်စနစ် တစ်ခု ရရှိဖို့အတွက် ဖုန်းအတွင်းပိုင်းမှာ အဆိုပါ အားသွင်းမြန်စနစ်ကို အထောက်အပံ့ပေးမယ့် ဆားကစ်တွေ ရှိရပါမယ်။ အားသွင်းခေါင်းနဲ့ အားသွင်းကြိုးမှာလည်း အဆိုပါ စနစ်ကို အထောက်အပံ့ပေးဖို့လိုတဲ့အပြင် ဖုန်းမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဘက်ထရီကလည်း အဆိုပါ အားသွင်းမြန်စနစ်ရဲ့ အမြန်နှုန်းကို လက်ခံနိုင်တဲ့ အဆင့်ရှိရပါဦးမယ်။ အဆိုပါ အချက်တွေကြောင့် အားသွင်းမြန် စနစ်တစ်ခုက ထင်သလောက် မရိုးရှင်းဘူး ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာ အနည်းငယ် မှားယွင်းသွားရုံနဲ့ ဘက်ထရီ မီးလောင်ပြီး ဖုန်းပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့ အထိ အန္တရာယ်များတာကြောင့် ဖုန်း ဘက်ထရီတွေ ထပေါက်လေ့ရှိတဲ့ အတိတ်ဆိုးရှိတဲ့ Samsung အနေနဲ့ အဆိုပါ အားသွင်းမြန်စနစ် အသစ်အတွက် အတော်လေးကို အာရုံစိုက်ရမှာပါ။ အဆိုပါ အားသွင်းမြန်စနစ် အသစ်ဟာ အပေါ်မှာ ပြောသွားသလိုပဲ သီးသန့် Charger တစ်ခုလိုမှာဖြစ်ပြီး Galaxy S10 နဲ့ S10+ တို့မှာ တစ်ပါတည်းပါဝင်လာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် Budget Version ဖြစ်တဲ့ Galaxy S10 Lite မှာတော့ ရိုးရိုး 15W Charger ပဲပါဝင်လာမှာမို့ သပ်သပ်ဝယ်ယူရမှာပါလို့ Ice Universe က ခန့်မှန်းပြာကြားထားပါသေးတယ်။
Ref: Giz China
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျအကွာက Samsung ကနပွေီး သူ့ရဲ့ ဖုနျးတှအေတှကျ အားသှငျးမွနျ စနဈတဈခုကို မိတျဆကျခဲ့ပွီး 15W အားရှိတဲ့ အားသှငျးစနဈဟာ တဈခွား ဖုနျးတှနေဲ့ ယှဉျလိုကျရငျ အတျောလေး အားသှငျးမွနျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဒီနခေ့တျေမှာတော့ OPPO ရဲ့ VOOC နဲ့ OnePlus ရဲ့ Dash Charge နဲ့ Warp Charge လို အလှနျလြှငျမွနျတဲ့ အားသှငျးစနဈတှကေို ပုခုံးခငျြး မယှဉျနိုငျတော့ပါဘူး။ ၂၀၁၈ ရဲ့ Flagship ဖွဈတဲ့ Galaxy Note9အထိ အရငျ အသုံးပွုခဲ့တဲ့ Adaptive Fast Charging နညျးပညာကိုပဲ အသုံးပွုနခေဲ့ပွီး ဖုနျးသုံးစှဲမှု အရမျးမြားလာတဲ့ ဒီနခေ့တျေမှာတော့ Adaptive Fast Charging နညျးပညာက မလုံလောကျတော့ပါဘူး။ အရငျခတျေကဆိုရငျ ဖုနျးကို နှဈနာရီ သုံးနာရီလောကျ အားသှငျးပွီး ပဈထားနိုငျခဲ့ကွပမေယျ့ နညျးပညာအပျေါ တဈခြိနျလုံးမှီခိုနရေတဲ့ ဒီနခေ့တျေမှာတော့ နာရီ ဝကျ အားသှငျးရုံနဲ့ တဈနလေုံ့း အသုံးပွုလို့ရမယျ့ နညျးပညာကို စမတျဖုနျးသုံးစှဲသူတှေ တောငျ့တလာကွပါပွီ။ အဲ့အတှကျ Samsung ကလညျး နောကျကောကျကြ မခံတော့ပါဘူး။ နောကျထပျ မိတျဆကျမယျ့ Flagship ဖွဈတဲ့ Galaxy S10 မှာ အတျောလေးလြှငျမွနျတဲ့ နောကျထပျ အားအမွနျသှငျး နညျးပညာတဈခုကို ထညျ့သှငျးပေးတော့မှာပါ။
စမတျဖုနျး သတငျးတှေ ပေါကျကွားဖျောပွလရှေိ့တဲ့ Ice Universe ရဲ့ သတငျးဖျောပွခကျြအရ Samsung ဟာ အလှနျလြှငျမွနျတဲ့ အားသှငျးမွနျစနဈကို စမျးသပျနပွေီး Galaxy S10 မှာ သခြောပေါကျ အဲ့ဒီ အားသှငျးမွနျစနဈကို တပျဆငျပေးသှားမှာပါ။ အဆိုပါ အားသှငျးမွနျ စနဈက အခုလကျရှိ Samsung ရဲ့ 15W အားရှိတဲ့ Adaptive Fast Charging ထကျ အတျောလေး မွနျဆနျမှာမို့ 15W Charging စနဈဟာ Samsung အတှကျတော့ သမိုငျးမှာ ကနျြခဲ့မယျ့ နညျးပညာတဈခု ဖွဈလာမှာပါ။ Samsung ဟာ အခုအခြိနျမှာ အဆိုပါ အားသှငျးမွနျစနဈကို စမျးသပျနပွေီ ဆိုပမေယျ့ Watt ပမာဏ ဘယျလောကျရှိလဲဆိုတာနဲ့ နာမညျဘယျလိုပေးမလဲ ဆိုတဲ့ အသေးစိတျ အခကျြအလကျတှကေိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
အဆိုပါ Samsung ရဲ့ မြိုးဆကျသဈ အားသှငျးမွနျ စနဈ သဈဟာ ပွိုငျဘကျ ဖုနျးကုမ်ပဏီတှရေဲ့ အားသှငျးမွနျ စနဈတှကေို ယှဉျနိုငျပါ့မလား? လကျရှိမှာတော့ HUAWEI ရဲ့ 40W အမွနျအားသှငျးစနဈနဲ့ OnePlus ရဲ့ Warp Charge ဟာ အားသှငျးအမွနျဆုံး အားသှငျးစနဈတှဖွေဈပွီး မိနဈနှဈဆယျ အားသှငျးရုံနဲ့ တဈနလေုံ့း အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ အားသှငျးမွနျစနဈ တဈခု ရရှိဖို့အတှကျ ဖုနျးအတှငျးပိုငျးမှာ အဆိုပါ အားသှငျးမွနျစနဈကို အထောကျအပံ့ပေးမယျ့ ဆားကဈတှေ ရှိရပါမယျ။ အားသှငျးခေါငျးနဲ့ အားသှငျးကွိုးမှာလညျး အဆိုပါ စနဈကို အထောကျအပံ့ပေးဖို့လိုတဲ့အပွငျ ဖုနျးမှာ အသုံးပွုတဲ့ ဘကျထရီကလညျး အဆိုပါ အားသှငျးမွနျစနဈရဲ့ အမွနျနှုနျးကို လကျခံနိုငျတဲ့ အဆငျ့ရှိရပါဦးမယျ။ အဆိုပါ အခကျြတှကွေောငျ့ အားသှငျးမွနျ စနဈတဈခုက ထငျသလောကျ မရိုးရှငျးဘူး ဆိုတာ သိနိုငျပါတယျ။ နညျးပညာ အနညျးငယျ မှားယှငျးသှားရုံနဲ့ ဘကျထရီ မီးလောငျပွီး ဖုနျးပေါကျကှဲနိုငျတဲ့ အထိ အန်တရာယျမြားတာကွောငျ့ ဖုနျး ဘကျထရီတှေ ထပေါကျလရှေိ့တဲ့ အတိတျဆိုးရှိတဲ့ Samsung အနနေဲ့ အဆိုပါ အားသှငျးမွနျစနဈ အသဈအတှကျ အတျောလေူကို အာရုံစိုကျရမှာ။ အဆိုပါ အားသှငျးမွနျစနဈ အသဈဟာ အပျေါမှာ ပွောသှားသလိုပဲ သီးသနျ့ Charger တဈခုလိုမှာဖွဈပွီး Galaxy S10 နဲ့ S10+ တို့မှာ တဈပါတညျးပါဝငျလာမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ Budget Version ဖွဈတဲ့ Galaxy S10 Lite မှာတော့ ရိုးရိုး 15W Charger ပဲပါဝငျလာမှာမို့ သပျသပျဝယျယူရမှာပါလို့ Ice Universe က ခနျ့မှနျးပွာကွားထားပါသေးတယျ။
MyTech Myanmar2018-12-22T10:09:55+06:30December 22nd, 2018|Samsung, Tips & Stories|
Geekbench မှာ အထင်ကြီးစရာမကောင်းတဲ့ ရမှတ်နဲ့ပေါ်ထွက်လာတဲ့ Samsung Galaxy Fold